Labo Beri oo Qura ayaa ka harsan Suuqa kala iibsiga…..(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay ee Saakay laga qoray Suuqa) – Gool FM
Labo Beri oo Qura ayaa ka harsan Suuqa kala iibsiga…..(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay ee Saakay laga qoray Suuqa)
Byare January 29, 2019
(Europe) 29 Jan 2019. Suuqa kala iibisiga ciyaartoyda ayaa waxaa ka harsan labo maalmood oo qura maadaama uu xiramayo 31-da bisha.
Haddaba waxaan halkaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Xanta Suuqa innagoona si Live ah wararka Suuqa idin kugu soo tabin doona maalinta ugu dambeysa ee 31-da Bisha.
Barcelona ayaa 50-milyan ku qaadan karta xiddiga Chelsea ee Willian, Blues ayaa horey u soo diiday dalab kaga yimid kooxda reer Spain oo lacag iyo waliba laacibkeeda Malcom, balse Barca weli ma quusan. (Mail)
Arsenal ayaa la warinayaa inay 35-milyan ku soo xero galin karto xiddiga qadka dhexe Inter Milan Ivan Perisic inta uusan suuqa xirmin inkastoo ay Gunners amaah ku dooneyso. (Mail)
Gunners ayaa sidoo kale dooneysa daafaca reer England ee kooxda Chelsea Gary Cahill, 33-jir, si uu uga caawiyo dhibaatada daafaca ka heysata. (Mirror)
29-jirka qadka dhexe Everton Idrissa Gueye, kaa oo ku guul darreystay dalab 21.5 milyan oo kaga yimid PSG ayaa doonaya inuu isaga dhaqaajiyo kooxda ka arrimisa Goodison Park. (Mail)
Chelsea ayaa dooneysa inay suuqa xagaaga la soo saxiixato xiddiga qadka dhexe reer Croatia ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic, 30-jir. (Sport)
Manchester City ayaa xiiseynaysa inay xagaagan la soo saxiixato daafaca reer England ee kooxda Leicester City Ben Chilwell, 22-jir. (ESPN)
Weeraryahanka reer Senegal ee kooxda Liverpool Sadio Mane 26-jir ayaa sheegay inay khuseyso oo kaliya kooxdiisa Reds iyadoo ay jirto qiyaas fikradeed la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo Real Madrid. (World Soccer)
Manchester United ayaa xiiseynaysay xiddiga qadka dhexe weerarka Inter Milan Ivan Perisic berigii uu xilka u hayay Jose Mourinho balse iminka laguma wado inay saxiixa 29-jirka reer Croatia kula dagaalanto Arsenal madaama uu tagay macalinka reer Portugal. (Evening Standard)
Manchester United ayaa xiddigeeda qadka dhexe reer Spain Juan Mata 30-jir u bandhigtay heshiis kordhin 12-bilood ah si ay u joojiso inuu bilaash kaga tago (Mirror)
Tottenham ayaa qorsheynaysa inay 30-milyan suuqa xagaaga ugu dhaqaaqdo xiddiga qadka dhexe Valencia ee Carlos Soler, 22-jirka ayaa waxaa kor ka wiideysanaya PSG. (ESPN)
Manchester City ayaa ogolaatay inay 11.29 milyan ay Schalke uga iibiso xiddigeeda reer Wales ee garabka ka ciyaara Rabbi Matondo 18-jir. (Telegraph)
Unai Emery oo kalsooni weyn ka muujiyay in ay maamulka kooxda Arsenal u sameyn doonaan arintan muhiimka ah
Liverpool oo Khatar ugu jirta inay habeen dambe wayso Daafaceeda Birta ah ee Virgil van Dijk